Interpreter | Technoland ﻿
Interpreter M/F (.)
30.8.2018, Full time , Technology
•	Attending meeting or conferences
•	Listing carefully
•	Accurate and succinct reproduction in the specified language
•	Translate verbal communication
•	Translate written communication
•	Sending or responding email
•	Record Interactions
•	Any Graduate and preferable related degree
•	Good writing in business terms
•	Being comfortable with public speaking
•	Good using Email
Work location 162/170, 36th St., Upper Middle Block,Kyauktada,Yangon
Job Function: Interpreter
291 Days, Full time , Technology
•	Attending meeting or conferences •	Listing carefully •	Accurate and succinct reproduction in the specified language •	Translate verbal communication •	Translate written communication •	Assist clients •	Sending or responding email •	Record Interactions
F&B Supervisor M/F (.)
•	Assess customer's needs and preferences and make recommendations •	Stay guest focused and nurture an excellent guest experience •	Comply with all food and beverage regulations •	Up to date with food and beverages trends and best practices •	Manage all F & B and day to day operation •	Managing staff and providing them •	Responding to customer complaints •	Report to MD regarding sales results and productivity
Sales Representative M/F (.)
•	Showroom Sales ပိုင်းအား ကောင်းမွန်စွာရောင်းချပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ICT Product နှင့် Electronic များ / Retail အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များအား တက်ကျွမ်းသူဖြစ်ရပါမည်။ •	Customer Service ကောင်းမွန်သောသူဖြစ်ရပါမည်။ •	ဆက်ဆံရေး ပြေပြ� ...
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် •	ရုံးစည်းကမ်းများအား လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်
•	To promote products via channels •	Assist to develop effective marketing strategies and plans •	Continuous study company products •	Work with various teams(design, acquisition, product, sales)
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် •	ရုံးစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်
•	Showroom Sales ပိုင်းအား ကောင်းမွန်စွာရောင်းချပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ICT Product နှင့် Electronic များ / Retail အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များအား တက်ကျွမ်းသူဖြစ်ရပါမည်။ •	Customer Service ကောင်းမွန်သောသူဖြစ်ရပါမည်။ •	ဆက်ဆံရေး ပြေပြ� ...
•	ကျန်းမာသန်စွမ်း၍အသောက်အစားကင်းရှင်းပြီး အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်၍ အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိရမည်။ •	ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ နယ်ဆိုင်� ...
•	I Stock Software အသုံးပြုနိုင်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ •	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည်။
•	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်လိုသူ ဖြစ်ရမည်
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်
•	Preparation and issue of detailed quotations for products and services based on requests from customers •	Co-ordination, completion and submission of pre-tender, tender and post-tender •	Support others to articulate tender responses •	Maintain records of quotations and tender submissions issued and resultant wins/losses •	Maintain documentation relating to quotations and tenders issued, including signed contracts •	Answer queries from customers and sales staff relating to products and pricing
•	To promote products via channels •	Developing effective marketing strategies and plans (Pricing, Advertising, Products Launching) •	Drive and support strategic projects and initiatives •	Identify and develop key marketing operations process to improve overall organizational efficiency and effectiveness •	Evaluate projects using relevant KPIs and feedback from existing and prospective customers •	Work with various teams(design, acquisition, product, sales)
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
•	Daily Checking with income and stock issues •	Report to Senior Auditor
Interpreter Translator/Interpreter jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Technoland Translator/Interpreter Jobs Translator/Interpreter Jobs Interpreter Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Naypyitaw City 263 Days